Human Rights News | Puntland Vision
Dhagayso:-Maamulka Khaatumo oo ku baaqay in lasoo dhaweeyo Shacabka Colaada Tukaraq ka Qaxaya.
January 20, 2018 By News Desk Leave a Comment
Maamulka Khaatumo ayaa markii ugu horaysa ka hadlay Colaada markale kasoo cusboonaatay Deegaanada uu ka taliyo maamulkaas kuwaas oo ay ka taagantahay xiisado colaadeed oo u dhexeeya Maamulada Soomaaliland iyo Puntland. Wasiirka Wasaaradda Arimaha Dibada Maamulka Khaatumo Mudane Caynaanshe C/raxamaan ayaa sheegay in looga baahanayhay shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay … [Read more...]
Dhagayso:- Xayawaanka la Xanaaneeyo kuwa ugu Dhibka Yar.
October 13, 2015 By News Desk Leave a Comment
13 October ( Puntland Vision ):- Magaalo walba oo Soomaaliya waxaa ku nool Xayawaan iyagu leh astaamo u gaar ah qaar kamid ah waxaa gacanta ku haya dad halka qaarkood ay yihiin kuwo cidlada weheshada. Xayawaanada dadku dhaqdo ayaan isku mid ahayn dhanka dabeecada dhaqashada iyo sidoo kale ilaalintooda shinbiraha ayaa qaarkood waxay yihiin kuwo lagu xanaanayn karo guryaha … [Read more...]
Dhagaysi+Sawirro:-Waalidiinta haya Dadka qaba Cudurada Dhimirka oo sheegay inay caqabad ka haysato dhanka Bukaanada ay hayaan.
October 11, 2015 By News Desk Leave a Comment
11 October ( Puntland Vision ):- Degmada Xarfo oo ka tirsan gobolka Mudug ayaa xiligan waxaa ka jirta xaalad adag taas oo soo wajahaday dadka maskaxda ka xanuunsan iyadoo inta badan ay caqabada ugu wayn ka haysato daawada kaalmaatiga ah ee lasiiyo dadka xanuunsan. Degmada Xarfo ee gobolka Mudug ayaa dhawan socdaal aan ku tagnay waxaan kusoo aragnay marxalado kaladuwan kuwaas … [Read more...]
Dhagayso:- Warbixin ka hadlaysa Caqabadaha ay lakulmaan wariyaasha
September 11, 2015 By News Desk Leave a Comment
Puntlandvision( PV ):- Akhrisku wuxuu kordhiyaa aqoonta guud, waana halka laga helo maclmuumaad dheeraad ah oo kobcinaya aqoonta qofeed. Akhrintu waxay si gaar ah muhiim ugu tahay Wariyaasha ka hawl gala gudaha Soomaliya ee wararka duuba akhriya isla markaana tabiya xogaha kaladuwan ee ka jira gudaha Soomaliya. Waxa uu si gaar ah akhrisku uga caawiyaa inay helaan aqoon … [Read more...]